တရားစွဲ – Eleven Media Group
ငွေအပ်နှံထားသူ၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော်ကို Mobile Banking အသုံးပြု၍ ထုတ်ယူသုံးစွဲထားသည် ဟုဆိုသော KBZ ဘဏ်ဝန်ထမ်းအား ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်
Posted on July 24, 2018 July 25, 2018 by သန့်စင်ကျော်
ငွေလာရောက် အပ်နှံသည့် အမျိုးသမီး၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော်ကို Mobile Banking အားအသုံးပြုပြီး ထုတ်ယူသုံးစွဲထားသည် ဟုဆိုသော ဘဏ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးအား ရန်ကင်းမြို့မရဲစခန်းတွင် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဂ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နေ ကမ္ဘောဇဘဏ် တောင်ဥက္ကလာပ (သစ္စာလမ်းဘဏ်ခွဲ) မှ ဘဏ်မန်နေဂျာ ဖြစ်သူသည် ဇူလိုင် ၂၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲခန့်က ကမ္ဘောဇဘဏ် (ရန်ကင်းဘဏ်ခွဲ) မှ မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဒေါ်….(၄၅ နှစ်) ဆိုသူအား ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ ၎င်းတို့သစ္စာလမ်းဘဏ်ခွဲတွင် ငွေလွှဲလာရောက် ထုတ်ယူသော ရန်ကင်းမြို့နယ်နေ ဒေါ်…. (၆၆ နှစ်) ၏ ဘဏ်စာအုပ်ရှိ ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ငွေများဖြည့်သွင်းရာတွင် ငွေပမာဏ ကွာခြားနေကြောင်း အကြောင်းကြားသဖြင့် ဒေါ်…. (၄၅ နှစ်) က ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများထံ သတင်းပို့ ဆက်သွယ်ပြီး ဒေါ်…. (၆၆ နှစ်) ၏ အကောင့်အား စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ အဆိုပါ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှ ငွေများကို ထုတ်ယူနေသည့် အကောင့်မှာ အကောင့်အမှတ် —– ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ အကောင့်၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှာ ကမ္ဘောဇဘဏ် (ရန်ကင်းဘဏ်ခွဲ) တွင် အကြီးတန်း လက်ထောက်အဖြစ် တာဝန်ခန့်အပ်ထားသည့် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နေ မ၀င်းလဲ့အိဖြူ (၃၀ နှစ်) ဆိုသူဖြစ်ပြီး Mobile Banking ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်ကို အသုံးပြု၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှ စတင်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေ ၂၉ ရက်အထိ အကြိမ်ရေ ၃၅ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် ၅၂၅ သိန်းအား ထုတ်ယူထားသည်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့တွေ့ရှိခဲ့ရသဖြင့် ငွေများထုတ်ယူပြီး အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်သူ မ၀င်းလဲ့အိဖြူအား ဒေါ်…. (၄၅ နှစ်) မှ တရားလိုပြုလုပ်ကာ သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကင်းမြို့မရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်တန်းခဲ့ပြီး ရဲစခန်းက (ပ)၂၉၈/၂၀၁၈၊ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဂ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကင်းမြို့မရဲစခန်းသို့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် ညနေပိုင်းက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖုန်းလက်ခံ ဖြေဆိုခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
Posted in CrimeTagged KBZ, တရားစွဲLeaveaComment on ငွေအပ်နှံထားသူ၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော်ကို Mobile Banking အသုံးပြု၍ ထုတ်ယူသုံးစွဲထားသည် ဟုဆိုသော KBZ ဘဏ်ဝန်ထမ်းအား ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်
Posted in NewsTagged တရားစွဲ, မင်္ဂလာဒုံ, ရန်ကုန်LeaveaComment on ထောက်ကြန်မြို့ ရဲစခန်းအနီးရှိ စားသောက်ဆိုင်၌ သံဃာတစ်ပါးကို ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့သည့် အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားလို ထောက်ကြန့်စခန်းမှူးအား စတင်စစ်ဆေး
သင်္ကြန်သံချပ်ပါ စာသားကြောင့် နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ကိုအောင်ထက်အား တောင်ငူမြို့နယ် တရားရုံးက အာမခံပေး
ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ကိုအောင်ထက်အား တောင်ငူမြို့နယ် တရားရုံးသို့ ရုံးထုတ်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဇော်ဝင်းချစ်)
သင်္ကြန်သံချပ်ပါ စာသားများကြောင့် တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦးက တရားလိုလုပ်ကာ အမှုဖွင့်၍ နိုင်ငံတော် အကြည်အညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ တောင်ငူမြို့ ကေတုအိုးဝေ တော်လှန်သံချပ်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်သူ ကိုအောင်ထက်အား တောင်ငူမြို့နယ် တရားရုံးမှာ သြဂုတ် ၁၅ ရက် ရုံးချိန်းတွင် အာမခံ ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
“ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ဒီအာမခံပေးတာတွေ လျှောက်တာတွေကတော့ ၅၀၅ (ခ)ကတော့ ပေးခွင့်မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ရှေ့နေတွေက သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် အာမခံရလာတယ်။ သူတို့ဆွဲထားတဲ့အပေါ် မှာအချိန်မရွေးလည်း သူတို့က အာမခံသိမ်းခွင့်ရှိနေတယ်။ ဘယ်အချိန်သူတို့အာမခံရုပ် ဖို့အတွက် ခရိုင်တွေမြို့နယ်တွေ အဆင့်တက်မယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ အဲဒီအပေါ်ပဲ မူတည်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က မှန်တဲ့အတွက် အဆုံးထိ ရင်ဆိုင်သွားမှာပဲ။ ၅၀၅ (ခ)ကတော့ လိုသုံးပုဒ်မပဲ။ ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ၅၀၅ (ခ) က တော့ သူတို့လိုသုံးပဲ၊ အဲဒီပုဒ်မကတော့ လုံးဝ မရှိသင့်တဲ့ပုဒ်မပဲ” ဟု အာမခံဖြင့်ပြန်လွတ်လာသော ကိုအောင်ထက်က ပြောကြားသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၃ ရက် သင်္ကြန်အကြိုနေ့၌ တောင်ငူခရိုင် ဗကသအဖွဲ့မှ ဗစ်တာ (ခ) ဝေယံသိန်းနှင့် ကိုအောင်ထက် ၃၇ နှစ် (ဘ)ဦးဖုန်းမောင် ၁၃ ရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့နေသူနှစ်ဦး၊ ဦးဆောင်သော “၀/၁၀ မျိုးဆက်သစ် ဗကသကျောင်းသားလူငယ် အင်အားစု ကေတုအိုးဝေ တော်လှန်ရေးသံချပ်” အဖွဲ့အင်အား ၁၅ ဦးခန့်တို့မှ တောင်ငူမြို့ပေါ်ရှိ ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်များတွင် သံချပ်ပါ စာသားဖျော်ဖြေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းမင်းအောင် ဦးစီးအရာရှိ (ပထမတန်း)စစ်ရေးက ဇွန် ၁၉ ရက်က တောင်ငူမြို့နယ် တရားရုံးတွင် တရားလိုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့ပြီးနောက် တောင်ငူမြို့နယ်တရားရုံးမှ ရာကြီးမှု အမှတ် (၂၄၅၄/၂၀၁၇) ဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထိုသို့လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ကိုကျူးလွန်ကြောင်းနှင့် စွဲချက်ရှိသည်ကို ထုချေရှင်းလင်းရန် သြဂုတ် ၁ ရက်တွင် တရားရုံးသို့ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ရာ ကိုဗစ်တာမှာ တရားရုံးသို့ လာရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိပဲ တရားရုံးသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ကိုအောင်ထက် တစ်ဦးထဲအား၊ ပုဒ်မ၅၀၅ (ခ)မှာ အာမခံပေး၍မရသော အမှုဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ သြဂုတ် ၁ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ်ရုံးချိန်း သြဂုတ် ၁၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် ကိုအောင်ထက်အား အာမခံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ကိုအောင်ထက်အား သြဂုတ် ၁၅ ရက် ရုံးထုတ်ချိန်တွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ တောင်ငူတို့မှ ဗကသကျောင်းသားများနှင့် မန္တလေးမြို့မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း အချို့တို့မှ လာရောက် ၀န်းရံအားပေးခဲ့ကြပြီး ကိုအောင်ထက်အား ရဲအချုပ်ကားဖြင့် တရားရုံးအချုပ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာစဉ်နှင့် တရားရုံးသို့ ရုံးထုတ်စဉ်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား အနီရောင် ကြက်ခြေခတ်ထားသော စတစ်ကာများကပ်၍ သွေးသစ္စာသီချင်းများ သံပြိုင်သီဆိုခြင်း၊ ကိုအောင်ထက်အား လွှတ်ပေးရန်ဟူသော ဗီနိုင်ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged တရားစွဲ, ပုဒ်မ ၅၀၅, အာမခံLeaveaComment on သင်္ကြန်သံချပ်ပါ စာသားကြောင့် နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ကိုအောင်ထက်အား တောင်ငူမြို့နယ် တရားရုံးက အာမခံပေး